Mora miditra amin'ny lamasinina avy tany Roma, Umbria dia manolotra vahoaka marobe ary vidiny mora kokoa any Italia. Tamin'ny faramparan'ny volana septambra ka hatramin'ny Oktobra, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. koa, Afaka miakatra any Perugia ianao mandritra ny fetin'ny Eurochocolate isan-taona. Noho izany, I Umbria dia mikasa ny manary tena ao amin'ny faritra mahafinaritra, mankafy ny sakafo sy divay tsara indrindra mandritra ny fialan-tsasatrao any Eropa. Mandritra ny dia fohy na lava, mipetraka amin'ny toerana tia karatra tahaka ny tantaram-pitiavana ianao, ao amin'ny iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra fararano tsara indrindra any Eoropa.
Ny sary an-tserasera dia tsy manao fahamarinana amin'ny mahagaga i Cinque Terre faritra any Italia. Ny trano mareva-tampon'ny havoana, voahodidina tanimboaloboka, trano fisakafoanana eo an-toerana, ary tongotra lavitra lalana, izany rehetra izany dia manao fitsangatsanganana faran'izay maoderina any Eropa. Cinque Terre no tena ahitana 8 tanàna kely ary ny lalamby lamasinina iray mampifandray azy rehetra. Manamora indrindra ny mamangy an'ireo tanàna rehetra ao 2-3 andro raha fohy ianao amin'ny fotoana. Inona no mety ho tsara kokoa noho ny fiaran-dalamby amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Eoropa amin'ny fararano?
Mbola mafana ny mari-pana amin'ny tapaky ny volana Oktobra, mba hipetraka eo akaikin'ny farihy miaraka amina vera iray avy amin'ny tanimboaloboka manodidina na manandrana tsato polenta amin'ny fetin'ny fararano. Raha mahaliana anao ny manampy kely ny fientanam-po sy ny fitsangatsanganana amin'ny fialan-tsasatrao latsaka any Eoropa, you can hike up Monte Bre. Ny fomba fijery avy amin'ny tendrony dia misy fomba fijery mahafinaritra ao amin'ny Lugano Bay.
Hannover no tanàna ambany ambany indrindra any Alemaina, fa iray amin'ireo toerana tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra latsaka any Eropa. Ity tanàna lehibe ity dia trano fonenana lehibe iray, indroa ny haben'ny Central Park any New York. Ancient oak trees and a farihy tsara eny amin'ny zaridainan'ny zaridaina, sahaza ho an-dàlana sy hariva satroka amin'ny fararano.
The Marktplatz Old Town sy ny tilikambo famantaranandro dia toerana tsara hanombohana hahitana ny maritrano ara-Gothic. Azonao atao ny manohy mankany amin'ny efitrano fampisehoana vaovao momba ny tanàna, tranobe toy ny grand-lapa izay miatrika farihy. Ny tany maitso maitso dia manodidina ny lapa lehibe ary mameno ny habakabaka mahafinaritra sy ny fijerena loko volamena.
Hannover dia iray amin'ireo sarobidin'i Alemà ary tsy ho tsara tarehy kokoa amin'ny fahalavoana. Raha mikasa ny fialan-tsasatra latsaka any Eoropa ianao, avy eo i Hannover no toerana halehan'ny dia. Tsy mbola maro ny mpizahatany no nahita ny majika nataony, toy izany, mety ho tany am-piandohana no nanana ny fotoana tamin'ny fiainanao tao an-tanàna.
Rissbachtal Valley ary Karwendel Alpine Park, dia toerana mahafinaritra mandehandeha any Aotrisy amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fararano. Ny karazana Alpine an'i Ahornboden dia manana 2,000 hazo sycamore-Maple, taona maro be mahavariana amin'ny lokon'ny fararano amin'ny volamena sy ny voasary. Ny natiora sy ny tendrombohitra dia mamorona seho tena tsara ho an'ny toerana fitetezam-paritany tsy hay hadino any Eropa.
The Chambord Castle dia 2 hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour and a half, hivezivezy ny lapa tsara tarehy ianao.
Ny zaridaina sy ny fomba fijery maro no manome fomba fijery mahavariana ny tanàna sy ny manodidina. amin'ny fararano dia tena mahafinaritra ny fomba fijery amin'ny fararano fararano. Noho izany, raha i Luxembourg kosa no tanàna lehibe indrindra any Eropa, dia mirehareha eo akaikin'ny tanànan'ny cosmopolitan lehibe toa an'i Paris. Tena mendrika ny hisafidy an'i Luxembourg amin'ny fialan-tsasatrao any Eropa amin'ny fararano.
Misaotra ny serivisy lalotra mandroso, afaka mandeha na aiza na aiza any Europe ianao tsy amin'ny fotoana rehetra. Hatramin'ny tanàna lehibe cosmopolitan dia hatramin'ny tanàna kely sy mahavariana, ny tanàna rehetra eto amintsika 10 tanàna tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra latsaka any Eropa, has its unique charm and magic.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Fialan-tsasatra faran'izay tsara indrindra any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)